Isivumelwano esiphathelene neentlawulo kunye noRhwebi (GATT) ngokubanzi
Oko Kufuneka Ukwazi Ngokweqhinga likaJanuwari 1948
Isivumelwano esivumelekileyo kwiTariffs kunye noRhwebi kwakuyimvumelwano phakathi kwamazwe angaphezu kwe-100 kubandakanywa neUnited States ukunciphisa amaninzi kunye nezinye izithintelo zokuthengisa. Isivumelwano, esibizwa ngokuba yi-GATT, sisayinwe ngo-Oktobha ka-1947 kwaye saqalisa ukusebenza ngoJanuwari ka-1948. Sahlaziywa ngamaxesha ambalwa ukususela kwisayina sazo sokuqala kodwa asizange sisebenze ukususela ngo-1994. I-GATT yandulele i-World Trade Organization kwaye yaqwalasela enye yeemvumelwano zorhwebo ezizimeleyo nakwiimpumelelo ezininzi kwiimbali.
I-GATT inikeze imithetho yezorhwebo yehlabathi kunye nesakhelo semibango yezorhwebo. Kwakuyimibutho emithathu yeBretton Woods eyenziwe emva kweMfazwe Yehlabathi II . Eminye yayiyiNgxowa-mali yeZizwe ngezizwe kunye neBhanki yehlabathi. Malunga namazwe amabini amabini atyikitya isivumelwano sokuqala ngo-1947 kodwa inxaxheba kwi-GATT yanda kumazwe angama-123 ngo-1994.
Injongo ekhankanyweyo yeGATT iyakususa "unyango olucaluliweyo kwizorhwebo ngamazwe ngamazwe" kwaye "ukuphakamisa imigangatho yokuphila, ukuqinisekisa ukuqeshwa ngokupheleleyo kunye nomlinganiselo omkhulu wokukhula ngenene kunye nemfuno efanelekileyo, ukuphuhlisa ukusetyenziswa ngokupheleleyo kwezibonelelo zehlabathi kunye nokwandisa imveliso kunye nokutshintshwa kweempahla. " Ungafunda isicatshulwa sesivumelwano ukuze ufumane ingqiqo.
I-GATT ekuqaleni yayiyimpumelelo, ngokwe-World Trade Organization.
"I-GATT yayisisigxina kunye nensimu engaphelelwanga, kodwa impumelelo yayo kwiminyaka engama-47 ekukhuthazeni nasekuqinisekiseni ukukhululeka kweentengiso ezininzi zehlabathi." Ukunciphisa ukuhlaliswa kweentlawulo kwedwa kwandinceda ukukhuphula izinga eliphezulu lokukhula kwezorhwebo ngeli hlabathi lama-1950 neye-1960. - malunga ne-8% ngonyaka. Ukugqithiswa kwe-intanethi yezoqoqosho kuncede ukuba kuqinisekiswe ukuba ukukhula kwezorhwebo ngokuqhubekayo kukhula ngokukhawuleza kwemveliso kwixesha le-GATT, umlinganiselo wamazwe okwandisa ukuthengisa kunye kunye nokufumana izibonelelo zorhwebo . "
Oktobha 30, 1947 : Inguqu yokuqala yeGATT isayinwe ngamazwe angama-23 eGeneva.
NgoJuni 30, 1949: Izibonelelo zokuqala ze-GATT zisebenza. Isivumelwano sinee-45,000 zokubambisa iintlawulo ezichaphazela i-$ 10 yezigidi zezorhwebo, malunga neyesisanu sehlabathi lonke ngeli xesha, ngokwe-World Trade Organization.
Ama-1949 : 13 amazwe ahlangene no-Annecy, empuma-mpuma yeFransi, ukuthetha ngokunciphisa amaxabiso.
Ngo-1951 : amazwe angama-28 adibana eTorquay, eNgilani, ukuthetha ngokunciphisa ixabiso.
Ngowe-1956 : amazwe angama-26 ahlangene eGeneva ukuthetha ngokunciphisa ixabiso.
1960 - 1961 : Amazwe angama-26 ahlangene eGeneva ukuxoxa ngokunciphisa ixabiso.
1964 - 1967 : Amazwe angama-62 ahlangene eGeneva ukuxubusha amanani kunye namanyathelo "okulwa nokulahla" kwizinto ezaziwa ngokuba yi-Kennedy ngeentetho zeGATT.
1973 - 1979: Amazwe angama-102 ahlangene eGeneva ukuxubusha amanani kunye namanyathelo angabhalisi kwizinto ezaziwa ngokuba yi "Tokyo round" yeentetho zeGATT.
Ngowe-1986 ukuya ku-1994: amazwe angama-123 edibeneyo eGeneva axubushe iintlawulo, iintlawulo ezingekho kwemirhumo, imithetho, iinkonzo, ipropati yengqondo, ukulungiswa kwemibango, izambatho, ezolimo kunye nokudalwa kwe-World Trade Organisation kwinto eyaziwa ngokuba yi-Uruguay ijikeleze iintetho ze-GATT. Iintetho zaseUruguay zazingumxholo wesibhozo kunye nesigxina seengxoxo zeGATT. Bakhokelela ekudalweni kwe-World Trade Organisation kunye nesethi entsha yezivumelwano zorhwebo.
Amaqumrhu ahlala ephikisana noorhwebo oluvulekileyo ukuze bakwazi ukufikelela kwiimarike ezintsha. Imisebenzi ibedla ngokubambisana nezithintelo zorhwebo ukwenzela ukukhusela imisebenzi yasekhaya. Ngenxa yokuba izivumelwano zorhwebo kufuneka zivunywe nguorhulumente, lo mbambano ubeka ingxabano yezopolitiko.
Uluhlu lwamazwe kwiGATT
Amazwe okuqala kwisivumelwano se-GATT:
Iimboniselo eziphambili zeDonnie Yen zexesha lonke
Kutheni I-Honeybees ichitheka?
Amanqamana kaNyaka ka-2012